Dhageyso: Wareysi lala yeeshay dagaalyahankii fuliyay Weerarkii Saldhigga Wisil.
0 Wednesday June 30, 2021 - 12:26:16
Idaacadda Andalus ee ku hadasha Afka Al Shabaab ayaa baahisay dardaaran uu reebay dagaalyahankii weerarka naf-hurnimo ku daah furay dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanka Wisil ee gobolka Mudug.
Calooshood ushaqeystayaal Ruush ah oo Muslimiin ku xasuuqay dalka Afrikada dhexe [Warbixin].
0 Tuesday June 29, 2021 - 19:42:34
Wargeyska The New York Times ayaa sheegay inu helay warbixin ay soo saartay UN-ka oo xaqiijineysa ku lug lahaanshaha calooshood u shaqeystayaal Ruush ah dagaallada iyo gumaad ka dhan ah dadka muslimiinta ee ku nool ee Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika.
0 Saturday June 26, 2021 - 10:47:50
Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka ee ehellada la ahaa Sheekh Cali Dheere oo ciidamo katirsan Dowladda federaalka iyo maamulka Galmudug horey ugu dileen gudaha magaaladaas.
0 Wednesday June 16, 2021 - 11:10:43
Ugaas Xuseen Ugaas Cabdullaahi iyo Nabadoon Maxamed Qooje oo isku aragti ahaa ayaa la dooday Maxamad Xuseen oo kamid ah saraakiisha ciidamada Dowladda federaalka ee gobolka Gedo.
0 Tuesday June 08, 2021 - 17:07:40
Hay'ado caalami ah ayaa markii ugu horraysay xaqiijiyay in maleeshiyaad soomaali ah ay qaab calooshood ushaqeystanimo uga dagaallamayaan dalka Itoobiya
0 Tuesday June 08, 2021 - 09:33:30
Nabadoono iyo waxgarad kamid ah bulshada ku nool gobolka Gedo ayaa si kulul u cambaareeyay tallaabadii ay dowladda Kenya duqeynta garadarrada ah kaga geystay deegaanka Ceelcadde, halkaas oo ay ku dishey hooyo iyo wiil ay dhashey kuna dhaawacday carruur kale.
Warbixin: Waa kuma hoggaamiyaha uu ugu doon doonista badanyahay Sirdoonka Yahuudda?
0 Sunday May 30, 2021 - 11:46:23
Sirdoon maamulka Yahuudda ee loo yaqaan Mossad ayaa kamid ah sirdoonnada caalamka ugu halista badan.
0 Sunday May 23, 2021 - 12:06:42
Waxaa soo gaba gaboobay kulamo in mudda ah usocday hoggaanka sare ee Xarakada Al Shabaab iyo waxgaradka beesha Qubeys oo kamid ah beelaha Soomaaliyeed.
Sheekh Abuu Cubeyda oo Jeediyay kalimad ku socota shacabka Jabuuti [dhageyso].
0 Saturday March 27, 2021 - 12:44:49
Cajallad cusub oo kasoo baxday garabka warbaahineed ee Al Shabaab ayaa farriimo cusub loogu diray shacabka Jabuuti.
Baraarujin Caafimaad: Naftaada ka ilaali Caabuqa halista ah ee Covid19.
0 Thursday March 11, 2021 - 08:58:25
Cudurka halista ah ee Carona Virus ayaa kusoo laba kacleeyay dalka Soomaaliya wuxuu geysanayaan dhimasho iyo bukaanno farabadan.
0 Sunday March 07, 2021 - 19:41:15
Warbixin: Kumuu ahaa Jamaal Faarax Aadan oo Gaalkacyo lagu dilay.
0 Wednesday March 03, 2021 - 17:55:01
Xoogag hubaysan ayaa habeen hore waqooyiga magalada Gaalkacyo ku dilay Jamaal Faarax Aadan oo kamid ahaa saraakiisha sirdoonka maamulka isku magacaabay Puntland.